Cameron oo la kulmay Xasan Sheekh - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Febraayo, 2013, 17:44 GMT 20:44 SGA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Raiisul Wasaaraha Britain David Cameron
Labada hoggaamiye ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka dal ee Soomaaliya iyo Britain.
Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron oo hadlay ayaa sheegay in Britain ay dooneyso in ay sameyso wax walba aan ku caawin karno Soomaaliya si dib loogu dhiso, isla markaana loo arko horumar dhaqaale, horumar siyaasad horumar dagaallanka argagaxisada.
Waxa uu intaa ku daray inay jiraan wax badan oo dhacaya iyo is beddel badan.
Kulanka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Raiisul Wasaaraha Dowladda Britain ayaa ku soo beegmay iyada oo maanta ay dowladda Britain ku dhawaaqday in Soomaaliya ay siineyso lacag Shan milyan oo dollar ku dhaw oo kaalmo cusub ah taasi oo wax looga qabanayo hooyooyinka iyo carruurta nafaqo darradu heyso.
Dowladda Britain ayaa sanadkii hore safiir u magacawday Soomaaliya, waxaana ay ku hawlan tahay xal u helidda arrimaha Soomaaliya.
Bisha May ee soo socota ayaa waxa magaalada London lagu qaban doonaa shir ku saabsan Soomaaliya.
Argagixiso 50 qof oo lagu dilay Nigeria 2 Maarso 2014